Ny opal afo dia mangarahara amin'ny opaline translucent - video
Hevitry ny opal afo. Izahay dia manao firavaka manokana miaraka amina vato opal voapaika na mena vita amin'ny afo ho toy ny kavina, peratra, rojo, haba na pendant.
Mividianana opal voajanahary ao amin'ny fivarotantsika
Ny opal an'ny afo dia mangarahara amin'ny opal translucent, miaraka amin'ny loko mavo ho an'ny volomboasary ka hatramin'ny mena. Na dia tsy mampiseho lalao miloko matetika aza izy io, dia hisy vato miseho mamirapiratra maitso mavana indraindray. Ny loharano malaza indrindra dia ny fanjakan'ny Querétaro any Mexico, ireo opal ireo dia antsoina matetika hoe opalin'ny afo Meksikana. Ny lohan'afo tsy mirehareha milalao afo izay tsy mampiseho milalao loko dia antsoina indraindray hoe valan'orana. Ny opal Meksikana indraindray dia tapaka ao amin'ny fitaovan'ny mpampiantrano azy ireo raha toa ka sarotra ny mamela ny fanapahana sy ny famolahana. Ity karazana opal Meksikana ity dia antsoina hoe opala Cantera. Ary koa, karazana opal avy any Meksika, antsoina hoe opal amin'ny rano meksikana, dia opal tsy misy loko izay mampiseho na volon'ondry manga na manga ao anatiny.
Ny Girasol opal dia teny iray indraindray izay diso sy tsy mety ampiasaina hilazana ny vato opal afo tsy miovaova, ary koa karazana quartz ronono karazana semitransparent mangarahara avy any Madagascar izay mampiseho asterisma, na vokatry ny kintana, rehefa tapaka tsara. Na izany aza, ny tena girasol opal dia karazana hyalite opal izay mampiseho hazavana manjelanjelatra na mamirapiratra manaraka ny loharano maivana manodidina. Tsy lalao miloko araka ny fahitana azy ao amin'ny opal sarobidy, fa vokatry ny fampidirana mikraoskaopy. Indraindray koa dia antsoina hoe opal rano izy io, raha avy any Mexico. Ny toerana roa manamarika indrindra an'ity karazana opal ity dia Oregon sy Mexico.
Ny opal Peroviana antsoina koa hoe opal manga dia vato semi-opaque amin'ny vato manga-maitso mangamanga hita any Peroa, izay tapaka matetika mba hampidirina ny matrix ao amin'ireo vato manjavozavo kokoa. Tsy mampiseho lalao miloko. Blue opal koa dia avy any Oregon any amin'ny faritr'i Owyhee, ary koa avy any Nevada manodidina ny Virgin Valley, Etazonia.
Hevitry ny opal afo
Ny opal afo dia vatosoa iray izay misy dikany sy fananana amin'ny famoahana ny toetran'ny tompony. Tahaka ny asehon'ilay anarana, ity vatosoa ity dia tandindon'ny "lelafo" ary manana angovo mahery vaika izy io. Azonao atao ny mampiasa ny herinao amin'ny alàlan'ny fandoroana ny herinao. Tsara ny mampiasa rehefa te hahatsapa ny nofinao na ny tanjonao ianao.
Fire Opal, avy any Mexico
Izahay dia manao firavaka manokana miaraka amina vato opal voapaika na mena vita amin'ny afo ho toy ny kavina, peratra, rojo, haba na pendant.